Waa tan sababta adduunku ugu baahan yahay fayrasyo ​​ay ku shaqeeyaan - teles relay
Haddii fayraska oo dhan laga wada baxo, dunidu aad ayey u kala duwanaan lahayd - lagamama maarmaan ma aha inay ka sii fiicnaato. Laakiin maxaa si sax ah u dhici lahaa?
Fayrasyadu waxay u muuqdaan inay jirayaan oo khalkhal ku keenayaan bulshada isla markaana ay dadka ku dhibaateeyaan. Waxay galaafteen nolosha aan kala go 'lahayn ee kumannaan kun, inta badanna waxay baabi'inayaan tiro badan oo ka mid ah dadka dunida ku nool - laga soo bilaabo cudurka faafa ee hargabka 1918 ee dilay 50 illaa 100 milyan oo qof qaar ka mid ah 200 milyan qof oo u dhintay cudurka furuqa oo keliya qarnigii 20aad. Cudurka faafa ee hadda jira 'Covid-19' waa mid ka mid ah weerarada fayras ee dilaaga ah ee socda weligoodna aan dhammaanin.
Haddii lasiiyay doorashada inay ka tanaasulaan sixir barar iyo inay tirtiraan fayraska oo dhan, dadka badankiis waxay u badan tahay inay ka faa'iideysan lahaayeen fursadan, gaar ahaan hadda. Hadana waxay noqon laheyd qalad geeri ah - oo aad uga darantahay, runti, virus ka waligiis jiri kara.
"Haddii fayraska oo dhan si lama filaan ah u baaba'o, dunidu waxay noqon lahayd meel cajiib ah qiyaastii maalin iyo badh, ka dibna dhammaanteen waan dhiman doonnaa - taasi waa natiijada," ayuu yidhi Tony Goldberg, oo ku takhasusay cudurka faafa ee Jaamacadda Wisconsin-Madison. Dhammaan waxyaabaha muhiimka ah ee ay ka sameeyaan adduunka ayaa aad uga badan waxyaabaha xun. "
Fayrasyada badankood ma ahan kuwo cudurka lagu kala qaado aadanaha iyo inbadan oo kamid ah waxay door muhiim ah ka ciyaaraan xoojinta deegaanka. Kuwo kale ayaa ilaaliya caafimaadka noolaha - shaqsi ahaan laga bilaabo fangaska iyo dhir ilaa cayayaanka iyo bini-aadamka. "Waxaan ku noolnahay isku-dheelitirnaan, isku-dheelitirnaan buuxda," iyo fayrasku qayb ayuu ka yahay, ayay tidhi Susana Lopez Charretón, oo ku takhasustay cilmiga nafsiga ah ee Jaamacadda Qaranka ee Madax-bannaan ee Mexico. Waxaan u malaynayaa inaan ku dhamayn lahayn fayras bilaash ah. "
Fayrasyada qaarkood waxay ilaaliyaan caafimaadka fangaska iyo dhirta (Dhibco: Getty Images)
Dadka intooda badani kama warqabaan doorka ay fayruusyadu ka ciyaaraan taageeridda nolosha badan ee Dunida, maadaama aan u jeedno inaan diirada saarno kaliya kuwa sababa dhibaatooyinka aadanaha. Ku dhawaad ​​dhammaan virologists waxay bartaan kaliya cudurada; Dhawaan ayay ahayd markii dhowr cilmi-baarayaal deg-deg ahi ay bilaabeen baarista fayrasyada nooga dhigaya nolosha iyo meeraha, halkii ay na dili lahaayeen.
Goldberg ayaa yidhi: "Iskuul yar oo saynisyahano ah ayaa iskudaya inay bixiyaan aragti sax ah oo isku dheelitiran oo ku saabsan adduunka ee fayrasyada ayna muujiyaan inay jiraan waxyaabo ay ka mid yihiin fayrasyo ​​wanaagsan," ayay tiri Goldberg.
Waxa saynisyahannadu u yaqaanaan hubaal waa iyada oo aan fayras jirin, nolosha iyo meeraha sida aan ognahay ay u joogsan doonaan inay jiraan. Iyo xitaa haddii aan rabno, waxay u badan tahay wax aan macquul aheyn in la baabi'iyo dhammaan fayrasyada ku jira Dhulka. Laakiin annaga oo qiyaasaya sida adduunka fayras ka xor ah u ekaan doono, waxaan si fiican u fahmi karnaa oo kaliya ma aha sida ay muhiim ugu yihiin badbaadadeena, laakiin sidoo kale inta aan weli u baahan nahay inaan wax ka baranno.
Fayras la'aan, meeraha sidaan ognahay inuu joogsan doono (Amaah: Getty Images)
Bilowga, cilmi baarayaashu xitaa ma oga inta virus ee jira. Kumaan kun ayaa si rasmi ah loo soocay, laakiin malaayiin ayaa joogi kara. "Waxaan ogaanay kaliya jajab yar sababta oo ah dadku uma eka wax badan," ayay tiri Marilyn Roossinck, cilmiga ku takhasusay cilmiga timirta ee Jaamacadda Penn State University. "Kaliya waa xaqiraad - saynisku had iyo jeer wuxuu ka hadlayaa cudurada. "
Saynisyahannadu sidoo kale ma ogaanayaan boqolkiiba inta wadarta fayrasku dhibaato u leeyahay aadanaha. Curtis Suttle, cilmiga ku takhasusay cilmiga deegaanka ee jaamacada British Columbia ayaa yidhi: "Haddii aad u aragto mid si qunyar ah u eegaysa, waxay ahaan lahayd mid tira ahaan ku dhow eber." "Ku dhawaad ​​dhammaan fayrasyada ayaan ahayn kuwo lagu kala qaado waxyaabaha annaga na daneeya."
Waxa aan ognahay waa in wajiyada, ama fiiruska faafa bakteeriyada, ay aad muhiim u yihiin. Magacyadoodu waxay ka yimaadeen faneed Griig, oo macnaheedu yahay "wax cunitaan" - oo way cunaan. Goldberg ayaa tidhi: "Waa ugaarsadayaasha ugu waaweyn adduunka bakteeriyada." Waxaan ku dhex dhaceynaa dhibaato weyn la'aantood. "
Wareegyadu waa xakameynta ugu weyn ee dadka bakteeriyada ku nool badda dhexdeeda, iyo laga yaabee in dhammaan deegaannada kale ee meerayaasha. Haddii fayrasku si lama filaan ah u baaba'o, qaar ka mid ah bakteeriyada qaarkood ayaa laga yaabaa inay qarxaan; kuwa kale ayaa laga yaabaa inay ka badato oo joojiyaan inay si buuxda u koraan.
Waxay noqon laheyd gaar ahaan dhibaato ku haysata badda dhexdeeda , halkaasoo in kabadan 90% ee walxaha nool, oo miisaankiisu yahay microbial. Microbes-ku waxay soo saaraan kalabarka oksijiinta meeraha - nidaam firfircoon by fayras .
Badda dhexdeeda, 90% wax walba oo nool ayaa ah microbial (Astaan: Getty Images)
Fayrasyadaani waxay dilaan qiyaastii 20% dhammaan microbes-ka badda iyo ilaa 50% dhammaan bakteeriyada badda maalin walba. Iyaga oo tirtiraya microbes, fayrasyadu waxay xaqiijinayaan in loo yaqaan 'plankton-soo-baxa' ay leeyihiin nafaqooyin ku filan oo ay ku fuliyaan heerar sare oo ah sawir-qaadis, ugu dambeyntiina taageera nolosha badan ee Dunida. - Haddii aanaan dhiman lahayn, markaa noloshu ma lihin, waayo noloshu gebi ahaanba waxay ku xidhan tahay agabyada dib loo warshadeeyo, ayay tidhi Suttle. “Fayrasyadu aad ayey muhiim ugu yihiin dib u adeegsiga. "
Baarayaasha cilmi baarista cayayaanka waxay sidoo kale ogaadeen in fayrasyadu ay muhiim u yihiin xakameynta tirada noocyada. Haddii nooc ka mid ah noocyada qaarkood ay buux dhaafeen, “fayras ayaa gudbi doona oo tirtiri doona,” ayuu yiri Roossinck. "Waa qayb aad u dabiici ah deegaanka." Nidaamkan, oo loogu magac daray "dilka guuleystaha," wuxuu sidoo kale ku badan yahay noocyo kale oo badan, oo ay ku jiraan kuwayaga - sida lagu caddeeyay cudurrada faafa. "Markii dadku ay aad u bato, fayrasyadu waxay u ekaadaan inay si dhakhso ah u taran karaan oo laayaan dadkaas, iyagoo abuuraya meel waxkasta oo ay ku noolaadaan ku noolaadaan," ayay tidhi Suttle. Haddii fayrasku si lama filaan ah u baaba'o, noocyada tartanku waxay u badan doonaan inay ku dhintaan kuwa kale.
"Waxaan si dhakhso leh u waayi doonaa inta badan noolaha meeraysan," ayuu yidhi Suttle. Waxaan haysanaa dhowr nooc oo la wareegi lahaa oo wax walba ugaarsan kara. "
Fayras la'aan, khubaradu waxay leeyihiin, waxaan lumin doonnaa inta badan noolaha meeraysan (Dhibco: Getty Images)
Noolaha qaarkood waxay sidoo kale kuxiran yihiin fayrasyada si ay u noolaadaan ama u siiyaan iyaga faa'iido adduun tartan leh. Saynisyahanada ayaa tuhunsan, tusaale ahaan, in fayrasku door muhiim ah ka ciyaarayo caawinta lo'da iyo sunta kale ee loo yaqaan 'unuglosese' in cawska loo beddelo sonkor taasoo la isku hallayn karo aakhirkana isu beddeli kara jirka iyo caano.
Baarayaasha sidoo kale waxay rumeysan yihiin in fayrasyadu ay qayb muhiim ah ka yihiin joogtaynta microbiomes caafimaad qaba jirka iyo bini’aadamka. "Waxyaabahaas si fiican looma fahmin, laakiin waxaan raadineynaa tusaalooyin badan oo ku saabsan is-dhexgalka dhow ee fayraska oo qayb muhiim ah ka ah deegaanka, ha ahaanshaha deegaankeenna ama deegaanka," ayuu yidhi Suttle.
Roossinck iyo asxaabtiisi waxay heleen cadeymo la taaban karo oo ay ku taageerayaan tan. Hal daraasad, waxay baarteen fungus oo gumeysata geedo gaar ah ee Beerta Qaranka ee Yellowstone. Waxay ogaadeen in fayras fayras ku keena xayawaankan u ogolaanaya cawsku inuu sameeyo noqo dulqaad leh heerkulka ciidda dhulka . Roossinck wuxuu yidhi: "Marka saddexda oo dhami ay jiraan - fayraska, fangaska iyo dhir - ka dib dhirtu waxay ku kori karaan carrada aad u kulul," ayuu yidhi Roossinck. "Fangasku kaligiis ma aha. "
Xadiiqadda Qaranka ee "Yellowstone Park", nooc ka mid ah cawska ayaa kordhay dulqaadka kuleylka sababtuna waa fayras (Khadka amaahda: Getty Images)
Daraasad kale, Roossinck wuxuu ogaadey in a fayraska waxaa ku faafa miraha jalapeno u oggolaanaya dhirta cudurka qaba inay ka hortagaan aphids-ka. "Aphids-ka ayaa aad u soo jiitay dhirta aan lahayn fayraska, marka waa runtii faa iido ayay leedahay," ayuu yidhi Roossinck.
Waxay iyada iyo asxaabteeda kale ogaadeen in dhirta iyo fangaska guud ahaan ay ugudbiyaan fayrasyada ka ab ka ab ilaa jiilka. In kasta oo aysan wali aqoonsanin waxqabadka fayrasyadan badankood, waxay moodayaan in fayrisyadu ay si uun u caawin karaan kuwa ay martigelinayaan. "Haddaysan ahayn, muxuu dhirta ugu dhejinayaa?" Roossinck ayaa yidhi. Haddii dhammaan fayrasyadan faa iidada leh lahaa ay baaba'aan, dhirta iyo unugyada kale ee hayaa waxay u badan tahay inay daciif noqonayaan ama xitaa dhiman doonaan.
Infekshannada fayrasyada khafiifka ah xitaa waxay gacan ka geysan karaan in cudurrada qaarkood laga ilaaliyo.
Fayraska GB C, oo ah fayruus caadi ah oo dhiiga aadanaha ku dhashay oo aan ehel u ahayn cudurada ka fog fayraska Niil Galbeed iyo qandhada dengue, ayaa lala xiriiriyaa dib u dhac ku yimid horumarka AIDS dadka qaba HIV. Saynisyahannadu waxay kaloo ogaadeen in fayraska GB C uu umuuqdo inuu ku dhacayo dadka qaba Ebola u yar tahay inuu dhinto .
Sidoo kale, herpes wuxuu sameeyaa jiirarka u nugul cudurada bakteeriyada qaarkood , oo ay ka mid yihiin cudurka boodboodka iyo listeria (nooc caan ah oo sumowga cuntada). Ku lug yeelashada dadka qaba herpesvirus, cudurka boonbaro iyo listeria si ay ugu faafiyaan waayo-aragnimada jiirka ayaa ah wax aan dhaqan gal aheyn, laakiin qorayaasha daraasadda waxay ka shakisan yihiin in natiijooyinka ka soo baxa jiirka ay u badan tahay inay saameyn ku yeeshaan aadanaha.
Cudurka herpes wuxuu sameeyaa jiirarka - iyo aadanaha ay u badan tahay - inuu u nugul yahay cudurada qaarkood ee bakteeriyada (Dhibcaha: Maktabadda Sawirka Sayniska)
In kasta oo infekshanka herpesvirus ee cimri dheer "guud ahaan loo tixgeliyo inuu yahay kaliya pathogenic", ayay qoreen, xogtoodu waxay soo jeedineysaa in herpes run ahaantii ay gasho "xiriir symbiotic" oo ay la leeyihiin martida loo yahay, iyagoo siinaya faa iidooyin difaac. Fayras la'aan, annaga iyo noocyo badan oo kale ayaan u badan nahay inaan ku dhicin cudurro kale.
Fayrasyada sidoo kale waxay ka mid yihiin wakiiloyinka daaweynta ee aadka u yareeya ee daaweynta cudurrada qaarkood. Daaweynta 'Phage therapy', oo ahayd mawduuc cilmi baaris weyn laga sameeyey Midowgii Soofiyeeti tan iyo sanadihii 1920-kii, ayaa adeegsada fayrasyo ​​lagu bartilmaameedsanayo caabuqyada bakteeriyada. Hadda waa aag si dhakhso leh u koraya - ma aha oo keliya sababtoo ah kororka iska caabbinta antibayootikada, laakiin sidoo kale sababtoo ah awoodda lagu nadiifiyo daaweynta si loo baabi'iyo noocyada bakteeriyada gaarka ah halkii laga tirtiri lahaa si aan kala sooc lahayn. Dhamaan bakteeriyadayada bakteeriyada, sida dawooyinka disha jeermiska cudurada keena. (Waxbadan ka baro) waxa aan qabanno oo aannan ka aqoon microbiome-keena ).
"Nolol badan ayaa lagu badbaadiyey markii la isticmaalay fayraska markii antibiyootigku fashilmay," ayuu yidhi Suttle. Fayrasyada loo yaqaan 'Oncolytic virus' , ama kuwa si weyn u kala qaadsiiya ama burburi kara unugyada kansarka, ayaa sidoo kale si isa soo taraya loogu baarayaa sidii sunta ka yareynaysa uguna waxtarka badan ee daaweynta kansarka. Haddii ay bartilmaameedsadaan bakteeriyada waxyeellada leh ama unugyada kansarka, fayrasyada daaweynta ayaa u dhaqma "sida gantaallo yar-yar oo hanuuniye ah oo gala unugyada aan rabin." "Waxaan u baahan nahay fayrasyo ​​si aan ugu sii wadno baaritaanka cilmi-baarista iyo dadaallada horumarineed ee teknolojiyadda ah oo noo horseedi doona jiilka xiga ee soo-saarka daawooyinka."
Fasaxidda fayrasku waxay saameyn ku yeelan doontaa suuradda isbeddelka nolosha ee meeraha oo dhan - oo ay ku jiraan Homo sapiens
Sababta oo ah waxay si joogto ah u dhaliyaan una beddelaan, fayrasyada ayaa sidoo kale leh kayd aad u weyn hal abuurka hidaha in ururada kale is dhexgali karaan. Fayrasyada waxay ku dhaliyaan iyagoo isu gelinaya unugyada martida loo yahay iyo iyagoo gudbaya qalabkooda taranka. Haddii tani ku dhacdo unugyada jeermiga (ukunta iyo shahwada), fayraska fayraska waxaa loo gudbin karaa jiilka xiga oo si joogto ah ayaa loogu dari karaa. Dhamaan unugyada lagu qaadi karo fayrasku waxay awood u leeyihiin inay ku nuugaan hiddo-wadaha fayraska oo ay uga faa iideystaan ​​waxtarkooda, ayay tidhi Goldberg. "Galinta DNA-da cusub ee xubnaha unugyada ayaa ah qaab weyn oo horumar ah." Si kale haddii loo dhigo, u luminta fayraska waxay saameyn ku yeelan doontaa suuraggalnimada isbeddelka ee nolosha dhammaan dunidda - oo ay ku jiraan Homo sapiens.
Waxyaalaha fayrasku waxay ka kooban yihiin ilaa 8% hiddo-wadaha aadamiga, iyo hiddo-wadayaasha mammalian guud ahaan waxaa lagu soo koobay qiyaastii 100 oo haraad ah oo hiddo-wadayaal ah kana yimid fayras. Koodhka feyrasku wuxuu badanaa u muujiyaa sidii qaybo gogo 'oo DNA ah, laakiin mararka qaarkood waxay gudbisaa wax cusub oo waxtar leh, haddii aan loo baahnayn, hawlo. Sanadka 000, tusaale ahaan, laba koox cilmi baaris ayaa si madaxbanaan u sameeyay daahfurka xiisaha leh. Asalka hiddo-wadaha asalka u ah borotiinka ciyaaraya a door muhiim ah sameynta xusuusta muddada-dheer adoo u dhaqaajinaya macluumaadka u dhexeeya unugyada nidaamka neerfaha.
Dib-u-soo-celinta qadiimiga ah ayaa mas'uul ka ah kartida aadanaha ee u leh dhalashada nool (Dhibcaha: Getty Images)
Tusaalaha ugu xiisaha badan, si kastaba ha ahaatee, wuxuu khuseeyaa isbeddelka mandheerta mammalian iyo waqtiga tilmaanta hiddaha muddada uurka aadanaha. Caddayntu waxay ina tusaysaa inaan leennahay awood aan ku leenahay dhalasho ku noolaanshaha nambarka hidaha ee yar-yar oo laga soo qaatay wax-ku-oolkii qadiimka ahaa ee ku dhacay cudurka awoowayaasheen in kabadan 130 milyan sano ka hor. Sida qoraayaasha daahfurka 2018 ay ku qoreen PLOS bayoolaji: "Waxaa jirraba in la maleeyo in uurka aadanaha uu aad u kala duwanaan karo - laga yaabee xitaa inuusan jirin - iyadoo aan la helin aafooyin cudurro dib-u-dhac ah oo saamaynaya awoowayaasheen horumarineed.
Khubaradu waxay rumeysan yihiin inay saxeexyadani ku dhacayaan dhammaan noocyada nolosha multicellular. - Waxa jira hawlo badan oo aan weli la garaneyn, ayuu yidhi Suttle.
Saynisyahannadu hadda waxay bilaabayaan inay ogaadaan sida fayrasyadu u caawiyaan sii wadista nolosha maxaa yeelay waxay hadda bilaabayaan inay baadhaan. Ugu dambeyntiina, si kastaba ha noqotee, in badan oo aan ka baranno dhammaan fayrasyada, oo aan ahayn kaliya cudurro, sida ugu wanaagsan ayaan u qalabaysnaan doonnaa si aan u xakameyno fayrasyada qaarkood wax wanaagsan oo aan u horumarinno difaacyada kuwa kale ee u horseedi kara masiibada soo socota.
Intaas wixii ka sii dheer, barashada ku saabsan taajirnimada kala duwanaanta fayras waxay naga caawineysaa furitaanka fahan qoto dheer oo ku saabsan sida meeraheena, deegaankeenna iyo jirkeenu u shaqeeyaan. Sida Suttle leeyahay, "Waa inaanu maal gelinno dadaallo si aan isugu dayno inaan fahamno waxa meesha ka jira, kaliya danteenna."
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore on: https://www.bbc.com/future/article/20200617-ke-if-all-viruses-disappeared